Amanqaku ka-Arvind Parthiban kwi Martech Zone |
Amanqaku ngu UArvind Parthiban
U-Arvind yi-CEO kunye nomseki we-co IsiZarget, apho ukongeza ekuqondeni umbono wenkampani kunye nokulingwa kwenyathelo lokufezekisa iinjongo zabo, ngoku ukhokela ukuthengiswa kwemveliso, presales kunye nemisebenzi yokuthengisa. Owayesakuba ngumqeshwa we-Zoho apho akhokele ukuthengiswa kwemveliso ye-ITSM suite yeemveliso eziphambili, u-Arvind wafumana ulwazi oluxabisekileyo kushishino lwe-SaaS kunye nazo zonke izinto 'zokuThengisa'. UArvind utsala kubutyebi bakhe obuninzi bamava ukuze anike amandla iiyunithi zeshishini phambili. Ukwangumntu olukhuni oswelekileyo wase-Chelsea.
Imisebenzi emitsha: Iimodyuli eziNinzi zokuGuqulwa kokuSebenzisa kwiModyuli enye
NgoLwesihlanu, Matshi 30, 2018 NgoLwesine, Novemba 5, 2020 UArvind Parthiban
Kule minyaka yedijithali, idabi lokuthengisa indawo litshintshile kwi-intanethi. Ngabantu abaninzi kwi-Intanethi, imirhumo kunye neentengiso zisukile kwindawo yazo yemveli zaya kwidijithali yazo entsha. Iiwebhusayithi kufuneka zikwimidlalo yazo efanelekileyo kwaye zithathele ingqalelo uyilo lwesiza kunye namava omsebenzisi. Ngenxa yoko, iiwebhusayithi zibaluleke kakhulu kwiingeniso zenkampani. Ngenxa yale meko, kulula ukubona ukuba inqanaba lokuguqula ukusebenza, okanye i-CRO njengoko yaziwa njalo